कांग्रेसकाे सरकार समक्ष अपील, जोखिम सामना गर्न सामग्री, दक्षता र गति बढाऔं
काठमाडाैं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले काेराेना संक्रमणकाे जाेखिमकाे सामना गर्न स्वास्थ्य सामग्री,दक्षता र काेराेना परिक्षणकाे गति बढाउन सरकारसँग अपिल गरेकाे छ । बुधबार नेपाल...
पासको दुरुपयोग गरि लकडाउन उल्लंघन गर्ने ८९७४ सवारी कार्वाहीमा
कोरोना भाईरस संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामको लागी लागू भएको लकडाउनको अबधीमा पास लिएर गुड्ने सवारी साधनहरुले पासको दुरुपयोग पनि गरेको पाइएको छ । लकडाउन अबधिमा पास लिएर समेत धेरै संख्यामा सवारी साधन गुड्...
चट्याङ लागेर ३ जनाको मृत्यु, ६ घाइते
काठमाडौं । मकवानपुर, राक्सिराङ गाउँपालिका-७ धिराङस्थित मंगलबार राति चट्याङ पर्दा सोही ठाउँ बस्ने ४१ वर्षीय चैतसिंह प्रजाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ । त्यस्तै दार्चुला, शैल्यशिखर नगरपालिका-६ तिखेधारस्...
परिवारको सदस्यको मृत्यु संस्कारमा जाने बाहेकलाई सवारी पास नदिने
काठमाडौँ । कोरोना भाइरस महामारीका कारण नेपालमा गत चैत ११ गते देखि लकडाउन अपनाइएको छ । सरकारले अत्यावश्यक काम कारबाही बाहेकका लागि सवारी पास नदिने निर्णय गरेको छ । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ...
नौ जुवाडे पक्राउ
उदयपुर ।जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा नौ जना जुवाडे पक्राउ परेका छन । उदयपुर जिल्लाको बेलका नगरपालिका-३ एकता टोलबाट जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा सोही टोल बस्ने ४५ वर्षीय राम बहादुर माझी सहित ९ जना पक्राउ ...
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्छ: डा. भट्टराई
काठमाडौँ । पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनु पर्ने बताएका छन् । डा. भट्टराईले बुधवार ट्विट मार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्...
कोरोना महामारीबीच दक्षिण कोरियामा आज मतदान हुँदै, कोरोना संक्रमितलाई पनि भोट हाल्ने व्यवस्था
एजेन्सी । विश्वव्यापी महामारी कोरोना संक्रमणकै बीच राष्ट्रियसभाका ३ सय सदस्यका लागि दक्षिण कोरियामा आज(बुधबार) आम निर्वाचन हुँदैछ । ४ वर्षे कार्यकालका लागि चुनिने उम्मेदवारलाई ४ करोड ४० लाख मतदाताले म...
लम्कीचुहाको महिलासँग सम्पर्कमा आएका सबै क्वारेन्टाइनमा
धनगढी । सोमबार कोरोनाको सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएकी कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाकी एक महिलासँग भेटघाट गर्ने ५४ जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । सङ्क्रमितसँगै वीरगञ्जबाट आएका सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राखिए...
वैशाख १५ गते सम्म लकडाउन थपियो
काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमणको अवस्थालाई नियाल्दै वैशाख १५ गते सम्म लकडाउन लागु गर्ने निर्णय गरेको छ ।मन्त्रीपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले वैशाख १५ सम्म लकडाउन लागु गर्ने निर्णय गरेको हो ।...
सनसिटी अपार्टमेन्टका दुइ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
काठमाडौं । काठमाडौँ, काँडाघारीको सनसिटी अपार्टमेन्टका तीन जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि । द्रूत परीक्षण र पीसीआर प्रविधिको नतिजा कोरोना भएको पुष्टि भएको जनाइएको छ । उनीहरु २८ दिनअघि बेलायतमा ...